Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Fizahantany Kerala: Diovy izao ny Fivoy ny Reniranon'i Chaliyar
Travel Travel • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao • tompon'andraikitra • News sustainability • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Hetsika ho eny amin'ny Kerala Paddle
Ny famoahana andiany faha-7 an'ny Chaliyar River Paddle dia hatao any Kerala, India, ny 12 ka hatramin'ny 14 Novambra 2021, miaraka amin'ny hafatra ho an'ny "plastika ratsy".
Ny hetsika fivoy telo andro nokarakarain'ny Jellyfish Watersports miaraka amin'ny Kerala Tourism dia mampiroborobo traikefa ara-panatanjahantena ara-tontolo iainana izay mampifandray ny tanora sy ny olon-dehibe.
Ny fivoy mirefy 68 km dia hanomboka avy ao Nilambur, any am-pototry ny ghats tandrefana ao Malappuram.
Hifarana any Beypore ao amin'ny distrikan'i Kozhikode izany, izay ihaonan'ny renirano amin'ny Ranomasina Arabo.
Ny protocols fiarovana amin'ny COVID dia harahina mandritra ny hetsika ary ny taratasy fanamarinana momba ny vaksiny COVID dia fepetra takiana amin'ny fandraisana anjara amin'ny hetsika. Amin'ity taona ity, raha jerena ny zava-misy, ity hetsika ity dia hampiroboroboina ho hetsika phoenix hanamafisana ny hetsika fizahan-tany any Kerala. Ny hetsika dia hanolotra fitsangantsanganana, lasy, ary loharano ho an'ny traikefa an-dranomasina, amin'ny fampiasana kayak, SUPs, rafts, ary amin'ity taona ity amin'ny andro fahatelo, ny mpikarakara dia mampiditra ny sculling (mpanevateva) sy ny sambo sambo izay mahatonga azy io ho isan-karazany bebe kokoa. lakandrano tsy misy moto, herin'olombelona ampiasaina - zava-baovao andrasana sy hiaina.
Ny Chaliyar River Paddle dia manolotra fahafahana amin'ny ambaratonga isan-karazany manomboka amin'ny vao manomboka ka hatramin'ny tsy mpilomano ka hatramin'ireo mpankafy fanatanjahan-tena an-drano, tia zavaboary, mpizaha tany, ankizy ary olona avy amin'ny lafim-piainana rehetra. Ny hetsika dia mampiroborobo ny reniranon'i Kerala, ny hakantony, ny nahandro Malabar tena izy, ary manome fahafahana manokana hihaona amin'ireo olona mitovy hevitra. Hifanome tanana amin’ny fampiroboroboana ny talentany ireo tarika mozika any an-toerana ary hanolotra takariva mampiala voly ho an’ny mpivoy. Ny trano fisakafoanana tsara indrindra eo an-toerana toa an'i Calicut Paragon no hikarakarana sakafo.
“Nifantoka tamin'ny famonjena ny reniranon'i Chaliyar amin'ny fahalotoan'ny tanàna sy ny fampiroboroboana ny fanaovana kayak ho an'ny rehetra ny Chaliyar River Paddle. Hetsika ratsy plastika izany, noho izany dia hanampy amin'ny fanadiovana ny renirano ny mpivoy rehefa manao kayak. Niara-niasa tamina fikambanana tsy miankina iray eo an-toerana izahay izay hanome kitapo fanangonan-tsonia ho an'ireo mpandray anjara ary hitondra ny fako any amin'ny toeram-pikarakarana ny fako. Hampianatra ny mpandray anjara amin’ny fanavahana araka ny tokony ho izy, ny fanjifana tompon’andraikitra ary ny fitantanana ny fako izy ireo. Ny fahazoana ny Fizahan-tany Kerala ny sehatra hiadiana amin'ny valan'aretina COVID miaraka amin'ny fanaparitahana ny fahatsiarovan-tena momba ny tontolo iainana ary indrindra ny fandotoana plastika mirongatra ao anaty renirano, ”hoy i Kaushiq Kodithodika, mpanorina ny Jellyfish Water Sports.
Misy fampahalalana bebe kokoa, anisan'izany ny fampahalalana momba ny fisoratana anarana hetsika, mety ho hita Eto.
Fampirantiana vaovao maneso ny mpitarika sinoa Xi Jinping no misokatra...
Lalao Gay 2026: Nahazo isa lehibe i Espaina Valencia